Isingeniso zokukhiqiza - China Nantong Wantong Steel Pipe
Lensimbi pipe ngamapayipi cylindrical eyenziwe ngensimbi futhi umkhiqizo ukusetshenziselwa kakhulu embonini steel. Ukusetshenziswa eyinhloko ngamapayipi ensimbi ungaphakathi ukuthuthwa kwemikhiqizo-kuhlanganise uwoyela, igesi, kanye namanzi olude. Common zasendlini ezifana fridges zisebenzisa ngamapayipi ensimbi, kanye Ukushisa kanye amapayipi izinhlelo. Steel amapayipi ziza ezihlukahlukene ngobukhulu kanye angasetshenziswa izidingo zesakhiwo lingangesandla komzila nogwali bollards.
Steel ipayipi ikhiqizwa omunye izindlela ezimbili, okuyinto nomphumela noma imikhiqizo Seamless noma ashiselwe.
ipayipi Seamless Yenziwe okuqinile round isitokwe okungukuthi lokuqala evuthayo ke extruded wadudula noma zidonswe die, kuphumele tube ozwakala. Le nqubo unikeza ipayipi Seamless ngiphele bushelelezi ngisho ebusweni, ngaphandle emalungeni ebonakalayo.
ipayipi ashiselwe ekhiqizwa kusukela amashidi steel ukuthi iphuma ke ashiselwe longitudinally kanye emalungeni iphuma. Ngenxa yalokhu, kuba umkhiqizo ukuthi unesikhathi ngokuhlanganyela eziphothene lonke. ipayipi ashiselwe kuyinto engabizi kuka extruded, ipayipi nekhono, kodwa ngeke abonise okufanayo impahla ngokomzimba izici, futhi isetshenziswa ngokuyinhloko for ongaphakeme ingcindezi zokusebenza noma izidingo ongaphakeme-umthwalo.
kuthiwa ngamapayipi ensimbi Kwakhethwa kanjani?
steel Raw kuveza encibilika izinto zokusetshenziswa esithandweni kanye nokulawula ukwakheka ngokusebenzisa ukwengeza Alloys nokususwa amanyela. steel encibilikisiwe is batheleka isikhunta ukwenza ingots, noma idluliselwe okuqhubekayo asakazwe umshini ukwenza ipuleti, amalunga, futhi izimbali zawo ziwukudla. Lokhu kuhlinzwa eluhlaza kumele iguqulwe ukuba uhlobo kungenziwa iphuma ku amapayipi of Ubukhulu ethize noma zaba amashubhu eziyize.
Skelp is unwound kusukela spool, evuthayo, agingqa ngokusebenzisa ezinamasondo ezimazombezombe, okuyinto goba emaphethelweni skelp phezulu. Le nqubo ukhiqiza ngamapayipi cylindrical lapho ebukhali izinsiko zombili ziye ibheke eduzane ukuhlangana nomunye ukwakha isilinda eside. Omunye izinqubo ezintathu Welding abese esetshenziswa ukuze ujoyine emaphethelweni ndawonye unamathelise ipayipi.
Ku-Welding ukusebenza okuqhubekayo, ezinamasondo Welding ucindezela emaphethelweni ipayipi ku nomunye-ukwakha weld kokuzihlanganisa ngenxa yokushisa osekuvele isetshenziswa skelp. Ayikho sensimbi wanezela phakathi Welding, kanye ezinamasondo yokugcina ukunciphisa ubukhulu kanye odongeni ukushuba ipayipi ezibekiweko.
2.Electric ukumelana Welding
Electric ukumelana Welding kulandela inqubo efanayo ukuze Welding okuqhubekayo, ngaphandle ukuthi skelp is abandayo iphuma ku ukuma ipayipi. Yamanje ihlinzekwa ukuze emaphethelweni ipayipi nge ezikhanyisayo amadiski yethusi, okuyinto ukufudumeza emaphethelweni kuze kube izinga lokushisa weld. ezinamasondo zokushisela ujoyine emaphethelweni ipayipi ukudala weld kokuzihlanganisa.
Welding Kuvunguza futhi double kwamanzi arc Welding Kusebentisa emasu Welding ezivamile kanye kwalokho weld impahla ukwakha isibopho.
amapayipi Seamless akhiqizwa ngaphandle kwesidingo Welding. Kudaliwe ngokubeka amalahle futhi ngilulekela okuqinile steel billet, ngaphambi Ukubhoboza ke ukwakha isikhungo eziyize. Amalunga abathukuthelela endaweni eshisa kakhulu sizenza zibe mhlophe ashisayo bese iphuma ngaphansi kwengcindezi okusezingeni eliphezulu abangela billet ngelule. A ichashazi ezimise umbhobozi isetshenziswa ukwenza isikhungo ozwakala njalo ngokuvumelana Ubukhulu bayo. Uchungechunge nokugaya ulandele ukuze kuvumelane ipayipi ezibekiweko edingekayo.
Inqawe kungenzeka ibekwe ngokusebenzisa umshini Ehlala njengendlela yokugcina inqubo isinyathelo ngaphambi kokuba afakwe emalungeni ekupheleni. Small wazalela piping ngokuvamile eline emalungeni kochungechunge, kodwa wathwala emikhulu piping ngokuvamile eline Flanges zazo ashiselwe ungene ekupheleni ipayipi. imishini Ukulinganisa ukuhlola ukuthi wawungakanani ipayipi siphelile, ushaye imininingwane ohlangothini ipayipi ukulawula izinga izinjongo.
isikhathi Iposi: Apr-09-2018